Keating oo golaha ammaanka QM uga warbixiyay arrimaha Doorashada Somalia
Keating oo golaha amaanka u sheegey in hanaankii doorashada Somalia la afduubey
MUQDISHU, Somalia- Wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Somalia, Michael Keating ayaa golaha Ammaanka Jamciyadda Quruumaha ka dhaxaysa uga waramay xaaladda Somalia iyo arrimihii ugu dambeeyay ee doorashada la filayo inay dhacdo 2016.
Keating, ayaa sheegay in doorashada waqtigii loo asteeyay dib u dhac kale Ku yimid isagoo walaac ka muujiyay siyaasiyiin uu xusay inay afduubayaan hannaanka doorashada.
“Dib u dhacii ugu dambeeyay waxaa uu keenay dhowr arrin oo cabsi leh, hadii aan magacaabo mid kamid ah; tan koowaad waa in hanaanka doorashada siyaasad lagu afduubo, tan kale dib u dhacan waxuu qeyb ka yahay dib u dhacyo horay u dhacay iyo kuwa wadada ku soo jira," Ayuu wakiilku.
Wuxuu sheegay inay aad u sarayso suurta galnimada ku aadan in la marin habaabiyo qorshayaashii lagu hishiiyay, "Suurta galnimada in hanaanka doorashada la afduubo waa mid aad u sareysa,”Ayuu hadalkiisa ku daray Danjire Keating.
Danjiraha, ayaa cadeeyay inay jirto walaac ku aadan waqti kordhintan cusub isagoo madasha ka sheegay in lagu tuntay sharcigii waddanka u yaallay gaar ahaan waqti joogista xafiiska ee Madaxweyne Xasan Sheekh.
Michael oo sii hadlayay ayaa ku nuux nuuxsada in laga cabsi qabo fowdo siyaasadeed oo ay keento mudada hadda lagu daray doorashada iyo mid kale oo saadaaliyay.
Wuxuu ka codsaday golaha ammaanka in laga shaqeeyo sidii Somalia uga dhici lahayd doorasho xor ah oo cadaalad Ku salaysan.
Diyaargarowgii socday ayuu tilmaamay in la dhammaystiray islamarkaana dhawaan la bilaabi doono diinwaangalinta Ergooyin gaaraya 14 kun iyo murashaxiinta u taagan labada Aqal ee Barlamanka Somalia.
Jadwalkii u dambeeyay ee Doorashada ayaa Guddigu sheegeen in Madaxweynaha la dooran doono 30-ka bisha November, halka doorashada Guddoonka labada aqal qabsoomi doonaan 23 November.
Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya oo ku soo wajahan Puntland [Sababta]
Puntland 11.05.2018. 14:42
Qaramada Midoobey iyo wadamada lacagta ku bixiya amniga Soomaaliya iyo mashaariicda...
​Keating, Khayre iyo Guddoonka Aqalka Sare oo kulmay
Soomaliya 05.03.2017. 22:48
​UN-ka "Al Shabaab wali Khatar ayay ku tahay amniga Somalia"
Soomaliya 05.11.2016. 13:19
Somalia: Beesha caalamka oo ka digtay in waqti laga lumiyo doorashada
Soomaliya 30.10.2016. 16:38
​Farole iyo Cali Xaaji oo si adag ula hadlay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Somalia [DAAWO]
Puntland 06.10.2016. 15:16
Baaritaan lagu sameynayo eedeymaha Qadar ee qaraxii Boosaaso 23.07.2019. 22:10
Soomaaliya oo "ku qanacday" bayaanka Qadar ee warbixintii NYT 23.07.2019. 20:21
Madaxweyne Deni oo ka hadlay shaqsiyaadkii lagu xiray Boosaaso 23.07.2019. 18:07
Farmaajo oo ka hadlay guusha Boris ee xilka ra'iisul wasaaraha UK 23.07.2019. 17:57
Deni: Si loo dhiirigeliyo, waa in Buugaagta laga gataa qalinleyda 23.07.2019. 16:52
Puntland oo dalbatay in la baaro warbixintii New York Times 23.07.2019. 15:38